ပွေး (ringworm) ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အနာဟာ မှိုပိုးဝင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပြီး ဆေးပညာအခေါ်အရ Dermatophytosis လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ringworm လို့ခေါ်ရတာကတော့ ဖြစ်စေတဲ့ ပိုးကောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ဟာ လက်စွပ်သို့မဟုတ် အ၀ိုင်းပုံစံရှိလို့ ပါပဲ။ ဒီရောဂါဟာ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန် တွေဖြစ်တဲ့ ခွေး၊ ကြောင်တွေကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်ပြီး ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
-အရေပြားကုတ်ရာ၊ ခြစ်ရာ၊ ပြတ်ရှဒဏ်ရာများမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း
-စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းပြီး သန့်ရှင်းမှု အားနည်းသော နေရာများမှာ နေထိုင်ရခြင်း
-အ၀တ်အစားများကို မလျှော်ဖွတ်ဘဲ ၀တ်ဆင်ခြင်း
-ခေါင်းဘီးများကို တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မျှဝေသုံးစွဲခြင်း
-ရေကူးကန်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှ ကူးစက်ခြင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
- ပွေးကွက်အပေါ်ကို လတ်ဆတ်တဲ့ သင်္ဘောသီးစိတ်ငယ်များကို ပုံပေးပါ
- မုန်ညင်းစေ့ကို အမှုန့်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် ရေအနည်းငယ်ရောပြီး အနည်းငယ်ပျစ်ချွဲအောင် လုပ်ပေးပါ။ ပွေးကွက်ပေါ်မှာအုံပေးရင် ပွေးကွက် များလျော့ပါးသက်သာနိုင်ပါတယ်။
- ကြက်သွန်ဖြူဟာ မှိုပိုးကိုနိုင်တဲ့ ဟင်းချက်စရာတစ်မျိုးပါ။ ပွေးကိုလည်း နှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အတွက် ကျိတ်ချေထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကို ပွေးကူး စက်နေတဲ့ နေရာပေါ်မှာ လိမ်းကျံပေးရင် ပွေးများပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
- ဗီနီဂါနဲ့ဆားကို ရောစပ်ပြီး ပွေးကွက်ပေါ်ကို လိမ်းကျံပေးပါ။ ငါးမိနစ်လောက်ထားပေးပြီး ရေနဲ့ သန့်စင်အောင် ဆေးကျောပေးပါ။
နေ့စဉ်လုပ်ပေးရင် ပွေးနာများ အနာကျက်မြန်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
- လာဗင်ဒါအဆီ (lavendar oil)မှာ မှိုပိုးကိုနိုင်တဲ့ အစွမ်းထက် အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ပွေးအနာပေါ် မှာလာဗင်ဒါအဆီကို နေ့စဉ်လိမ်းပေး ရင်ပွေးပွားတာကို မလျော့စေနိုင်ပေမယ့်ပိုးတွေကိုတော့ သေစေနိုင်ပါတယ်။
- လက်ဖက်ဆီလည်း ပွေးကိုနိုင်နင်းတဲ့ အဆီတစ်မျိုးပါ။ လက်ဖက်စေ့ဆီ အနည်းငယ်ကိုသန့်စင်တဲ့ ဂွမ်းစနဲ့ စွတ်ပြီးပွေးကွက်ပေါ် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပွေးနာတွေ လျော့ပါးသက်သာ သွားနိုင်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန် ဗဟန်းမြို့နယ် ကြားတောရလမ်း၌ OIC အဖွဲ့နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရာတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စော်ကားသော စာသားပါဝင်သည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြသဖြင့်
အဆိုပါ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ဆောင်ခဲ့သူများကို ပုဒ်မ ၂၉၅ (တပါးသူ၏ ဘာသာ၊ သာသနာကို စော်ကားမှု) ဖြင့် အရေးယူရန် စုံစမ်းလျှက် ရှိကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိ ရဲတဦးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
အဆိုပါ စာသားကဲ့သို့ ပြင်းထန်သည့် စကားလုံးများ ပါဝင်သည့် ဆိုင်းဘုတ် တချို့လည်း ထပ်မံ တွေ့ရှိရသည့်အတွက် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းစာသားများကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများက ရေးသားခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကြားဝင် နှောင့်ယှက် မှုများကြောင့် ဘာသာရေး ထိခိုက်စေသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ပါဝင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ စာသားအားလုံးကို
မစိစစ် လိုက်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“တကယ်ဆို အစိုးရနဲ့ နယ်မြေခံ တာဝန်ရှိသူတွေမှာလည်း ဒီကိစ္စအတွက် တာဝန်ရှိတာပဲ၊ သူတို့တွေကလည်း စာသားတွေကို စစ်ဆေးသင့်တယ်လေ၊ ကျနော်တို့တွေက အစိုးရ လက်အောက်ကနေ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ သူတွေမဟုတ်လား” ဟု ၎င်းက
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ ၁၆ ရက် နေ့များက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည့် OIC အဖွဲ့ လာရောက်သည့် အပေါ် လက်မခံနိုင်သည့် အတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ လားရှိုး၊ စစ်တွေ၊ တောင်ကုတ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ မြောက်ဦး စသည့် မြို့တချို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုင်းဆန္ဒပြ အင်အားစုနှစ်ခု အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားရာမှ နှစ်ဦးသေဆုံး ဘန်ကောက်တွင် စစ်တပ်များနေရာယူ
ဘန်ကောက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁
အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသမားများနှင့် အစိုးရကို လိုလားသူ တန်ပြန် ဆန္ဒပြကြသည့် ရှပ်နီများ မြို့တော် ဘန်ကောက်တွင် ထိပ်တိုက် ရန်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရာ လူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာ ရရှိသွားခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီ သတင်းများက ဖော်ပြထားကြပြီး စစ်တပ်ကလည်း ဘန်ကောက်တွင် လာရောက် တပ်စွဲနေရာယူကြပြီ ဖြစ်သည်။
အစိုးရကို မလိုလားသည့် ဆန္ဒပြသူများက အစိုးရရုံးများကို ဝင်ရောက် စီးနင်း နေရာယူမှုများ ပြုလုပ်နေသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားနေမှုကို ကူညီသည့် အနေဖြင့် စစ်တပ်က လာရောက် အားဖြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရရုံးချုပ်ကို ဆန္ဒပြသူများက လာရောက်ကြပြီး အကာအကွယ် အတားအဆီးများကို ကျော်ရန် ကြိုးစားကြရာမှ ရဲက မျက်ရည်ယို ဗုံးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။
အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသမားများက ယင်းလပ်အစိုးရသည် သက်ဆင်၏ ကြိုးကိုင်မှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောဆိုထားကြသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် ရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လွှင့်ရုံများကိုလည်း ဝင်ရောက်ကြပြီး ရုပ်သံလွှင့်မှု အစီအစဉ်များကို ရယူရန် ဆွေးနွေးမှုများ ရှိလာပြီး Thai PBS ရုပ်သံလိုင်းကိုလည်း အုပ်စုတစ်စုက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။
BBC ၏ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် သတင်းထောက် ဂျိုနာဖစ်ရှာက အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် အာဏာသိမ်း သကဲ့သို့ ခံစားရကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သည်။
အစိုးရအနေနှင့် ဆန္ဒပြသူများကို နှိမ်နင်းရာတွင် အကြမ်းဖက်ခြင်း နည်းလမ်းကို လုံးဝအသုံးပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်ရှင်နာဝပ်က ကတိကဝတ် ပြုခဲ့ဖူးသည်။
ယင်းလပ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး ဆန္ဒပြသူများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် စစ်တပ်ကို အသုံးပြုပါရန် ရှပ်နီများက အားကစားကွင်း တစ်ကွင်းတွင် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ အရေးဆိုမှုကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီဟု ရှပ်နီ ခေါင်းဆောင်များက ကြေညာထားသည်။
အစိုးရကို လိုလားသူများ အားကစားကွင်းသို့ သွားသည့် ကားများကို ကျောင်းသားများက တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှ အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြပွဲများသည် အကြမ်းဖက် မြင်ကွင်းများအဖြစ် ပြောင်းသွား ခဲ့ပြီး သေဆုံးသူနှစ်ဦး ရှိခဲ့သည်။
လမ်းမပေါ် နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု အရှိန်ရနေပြီးဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကလည်း သက်ဆင်ကို လိုလားသည့် ရှပ်နီများက ဘန်ကောက် မြို့တော်၏ အရေးကြီး နေရာများကို ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပြီး အလုံးအရင်း ဆန္ဒပြခဲ့ရာမှ လူ ၉၀ သေဆုံးခဲ့ဖူးသည်။
ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေ တာ နှစ်ခု၌ အလုပ်လျှောက်လွှာများ အပြိုင်အဆိုင် ခေါ်ယူနေကြပြီး လျှောက် ထားလိုသူများပြား
ပြည်တွင်း၌ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို ရရှိထားသည့် နော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက် Telenor နှင့် ကာတာနိုင်ငံအခြေစိုက် Ooredoo နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အလုပ်လျှောက်ထားမှုများ မြင့်တက်လျက် ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
သုံးစွဲမည့်သူများသို့ ဈေးကွက်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်များကိုလည်း အပြိုင်အဆိုင်ခင်းကျင်း ပြသနေကြသည့် အဆိုပါနိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ များဘက်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသား ဝန်ထမ်းများကို အပြိုင်ခေါ်ယူမှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“အခုလို ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလာပြီး လုပ်ကိုင်မယ့် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ချင်စိတ်က အရမ်းပြင်းပြနေတယ်။ ကျွန်မတို့လိုပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အများကြီးဆိုတာ တွေ့နေရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအဆင့်မြင့် ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ စိတ်ဝင်တစားလျှောက်ထားတဲ့ သူတွေများနေတာရဲ့နောက်ကွယ်မှာကလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ ဒီကလူငယ်တွေ အခုထက်ပိုကြိုးစားဖို့ လိုတယ်လို့မြင်တယ်” ဟု အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လျှောက်ထားရန် ပြင်ဆင်နေသူ အမျိုးသမီးကဆိုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများ၏ အလုပ်အကိုင်ခေါ်ယူမှုတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုများက လျှောက်ထားသည့်နိုင်ငံသားများအတွက် အဓိကကျသည့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေကြောင်းလည်း အဆိုပါကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လျှောက်ထားမှု ပြုလုပ်ထားသူတချို့က ဆိုကြသည်။
နော်ဝေဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Petter Furberg က ၎င်းတို့သည် လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဝန်ထမ်းပေါင်း ကိုးဆယ်ခန့်ကို အလုပ်အကိုင်နေရာများ ခန့်အပ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်အကုန်တွင် တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ဦးရေခန့်အထိ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် ရည်မှန်းထားသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်လိုသည့် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသားများ၏ များပြားသော အလုပ်လျှောက်လွှာများကိုလည်း လက်ခံရရှိနေကြောင်း ဆိုသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်သည့် ကာတာနိုင်ငံ Ooredoo ကုမ္ပဏီ၏ မြန်မာပြည် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Ross Cormack က လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းတွင် ၎င်းတို့ထံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်အကိုင်နေရာများ ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်မည်ဟု အခိုင်အမာသတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“တစ်နေ့တခြား တိုးပွါးလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ အခုလောလောဆယ် ဝန်ထမ်းဦးရေ တစ်ရာ့ငါးဆယ်လောက် ရှိနေပါတယ်။ လူမျိုးပေါင်းက ၃၀ လောက်ရှိနေပါပြီ။ အခုထက်ပိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ဝန်ထမ်းအင်အား တိုးတက်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
လာမယ့်နှစ်အကုန်မှာ ဝန်ထမ်းဦးရေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အပါအဝင် တစ်ထောင်ကျော်လောက် ရှိလာဖို့ရည်မှန်းပါတယ်။ ရေရှည်အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝန်ထမ်းဦးရေ ငါးထောင်လောက်အထိကို ခန့်အပ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်” ဟု အထက်ပါ တာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ လိုအပ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အဓိကကျသည့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု ပိုင်းတွင်လည်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေသည့် ၎င်းအော်ပရေတာနှစ်ခုသည်
၎င်းတို့၏အရောင်းဌာန၊ ဖြန့်ချိရေးဌာန၊ ဝယ်ယူသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရသည့်ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဌာန၊ လက်လီအရောင်းဌာန၊ ရုံးတွင်းပိုင်းဌာန အစရှိသည့် နေရာများအ
တွက် နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းများကို အဆက်မပြတ်ခေါ်ယူ နေကြခြင်းသည်။
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်တွင်းရှိ ၎င်းကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရန် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိနေသည်ဟု ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့က သုံးသပ်ကြသည်။
ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် စတင်နေပြီဖြစ်သည့် အဆိုပါဆက် သွယ်ရေးအော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့၏အဆင့်မြင့် ဝန်ထမ်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများအပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့မှ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများကိုပါ
အာဂျင်တီးနားတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် သတို့သား၏ လက်ထပ်ပွဲ ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင်ခွင့်ပြု
နိုဝင်ဘာ ၂၉ရက် အာဂျင်တီးနားတွင် ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသားနှင့် သူ၏ချစ်သူ ( မိန်းမဘ၀ ပြောင်းထားသူ)တို့၏လက်ထပ်ပွဲသည် နိုင်ငံအတွင်း
လိင်ပြောင်းသူအချင်းချင်း ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသား တစ်ဦး ၏ လက်ထပ်ပွဲ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အာဂျင်တီးနားသည် လက်တင်အမေရိကတွင် လိင်တူထိမ်းမြားမှုများ တရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ပထမဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကြာလာသည့် ယခုအချိန်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသား လက်ထပ်ပွဲကို တရားဝင် ထပ်မံ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၉ရက်က အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ဗစ်တိုးရီုးယားတွင် လက်ထပ်သည့် စုံတွဲတွင် ရှစ်လသား ကိုယ်ဝန်ကို ဆောင်ထားသော သတိုးသား Alexis Taborda သည် မူလက မိန်းမ ဘ၀ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး လိင်အင်္ဂါ ပြောင်းလဲခွဲ စိတ်ပြီးနောက်ပိုင်း အမျိုးသားတစ်ဦးအဖြစ် တရားဝင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ သူတို့သမီး ဖြစ်သူ Karen Bruselario သည် ယောက်ျားဘ၀နှင့် မွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက် ယခုလက်ထပ်ချိန်တွင်မူ ဥပဒေအရ အမျိုးသမီးဘ၀ကို တရားဝင် ရယူထားသူဖြစ်သည်။
သူတို့နှစ်ဦးသည် လိင်အင်္ဂါပြောင်းသူများနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေ ကတ်ပြားတွင် လိင်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲသူတို့၏ အခွင့်အရေး
ဆွေးနွေးပွဲတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နောက်ထပ်အခွင့်အရေး သစ်တစ်ရပ်ကို ပူးပေါင်း ဖော်ဆောင်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတော့သည်။
သတို့သား Taborda ၂၆နှစ်က သူနှစ်ဦးသည် တရားးဝင်လက်ထပ်ခွင့်ရသည်အတွက် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် နေ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သူတို့၏ အိပ်မက်များ အမှန်တကယ် အကောင်အထည် ပေါ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနနှင့် တယ်လီဖုန်း မေးမြန်းခန်းတွင် ပြောပြခဲ့သည်။
သူတို့၏ ကျား/မ အမျိုးအစားကိုလည် ပြန်လည်ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သတို့၏ ဖြစ်ရပ်ကို အာဂျင်တီနားနွယ်ဖွား ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်ထံသို့ အီးမေးလ်ပို့ကာ တုန့်ပြန်ချက်တစ်စုံတရာ တောင်းခံထားကြောင်း ပျော်ရွင်စွာ
(1) Drink and drive?No sir!
(2) I'm serious!
(3) He'saWin Oo look-alike.
သူကတော့ ၀င်းဦးနဲ့ ချွတ်စွပ်တူတာပဲ။
(4) There it is!
(5) Look what you did!
(6) No way out!
(7) Hit the spot!
(8) Nothing to it!
(9) Cheer up!
(10) How come?
(11) He'saman's man.
(12) Is he out and about?
(13) Sad to say,...
(14) His number was up!
သူ.. ကြွသွားပြီ။ (လျှောသွားပြီ။)
(15) Perish the thought!
အခုအချိန်မှာတော့ ကိုယ်ဝန်လေးလကျော် လွယ်ထားရတဲ့ ချောရတနာက ရင်သွေးလေးက သားဦးဖြစ်တဲ့အတွက် မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစစ အရာရာဂရုစိုက် ပြီးေ တာ့ သတိ ထားဆင်ခြင်နေထိုင်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဝိတိုရိယဆေးရုံက ဆရာမ ဒေါ်ခင်လေးကြွယ်နဲ့ ချောက ပြနေ တယ်။ ကိုယ်ဝန်က လေးလခွဲရှိနေ ပြီ။ အစက ချောမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ ရှိနေမှန်း မသိဘူး။ အရင်ကတည်းက ကိုယ်မှာက သွေးပေါင်ကျပြီး မူး တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိတဲ့ လက္ခဏာမျိုးလည်း သူများတွေလို မပြတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်း မသိဘူး။ နောက်တော့ ဆေးခန်းပြကြည့် တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းသိသွားတယ်။ တအားလည်း ဝမ်းသာပြီး ပျော်သွား တယ်။ ချောနဲ့အတူ ချောရဲ့အမျိုး သားကလည်း ပျော်နေတယ်။ တအားလည်း အံ့သြသွားတယ်။ အခု ထိတော့ သမီး လေးလား၊သားလေးလားဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး။ အခုချိန်ထိတော့ ချောက အစား အသောက်လည်း စားရတာ အဆင်ပြေတယ်။ အစား မရွေးဘူး။ အရင်လို တော့ သွားချင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေ ရှိ ရင် တအားတော့သွားလို့မရဘူး။ ဆင်ခြင်ပြီးတော့ နေထိုင်ဖြစ် တယ်။ အစားအသောက်လည်း အကုန်စားတယ်။ ဒုက္ခ တော့ မရှိဘူး။ သူများတွေ လို အော့အန်တာမျိုးလည်း မရှိဘူး။ ကိုယ်က သားဦးလေးမွေးမှာဆိုတော့ အစစ အရာ ရာတော့ ဂရုစိုက်ဖြစ်တယ်။ ကလေးကို ကျန်း ကျန်းမာ မာလေးဖြစ်ဖို့တော့ ဆုတောင်း ဖြစ်တယ်။ချောကတော့ ဝိတိုရိယ ဆေးရုံမှာ ပဲ မွေး ဖြစ်မှာပါ။ ချောတို့ နှစ်ယောက်စလုံး က အခု မွေးမှာက သားဦးဖြစ် တဲ့အတွက် သားသားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မီးမီးပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်မှာပါ။ အခုလည်း ဆေးရုံ ကိုတော့ ပုံမှန်သွားပြီး ပြဖြစ်တယ်။ အစစအရာရာတော့ အမှားမရှိအောင် အတတ် နိုင်ဆုံး ဂရုစိုက်ပြီး နေရတယ်။ တခြားစိုး ရိမ်စိတ်တော့ မရှိပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
ဆွဲဆောင်မှု ပြင်းပြင်း HTC One Max အနီရောင်ဗားရှင်း ထွက်ပေါ်လာ တော့မည်
တရုတ်အခြေစိုက် Mobile operator ဖြစ်သူ FarEasTone Telecommunications က HTC One Max အနီရောင်ဗားရှင်းကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သတင်းထုတ်လွှင့်ထားပါတယ်။
ယခင်က HTC One Max ကို အနက်ရောင်နဲ့ ငွေရောင်ဗားရှင်း နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ အနီရောင်ကိုယ်ထည်နဲ့
မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အပြာရောင်ဗားရှင်း ထပ်ထုတ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ထည်အနီရောင်လေးနဲ့ HTC One Max က ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု ရှိ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ပြည်တွင်းကိုရောက်ရှိလာရင် ဘယ်လို အရောင်မျိုးတွေ
မြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်လိုက်ကြရအောင်။
သြဇီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြတဲ့ ဒီပဲယင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း အကြောင်း
၂၀၀၃ မှာ ကျမ အထက်မြန်မာပြည်ကို ခရီးသွားတုန်း ကျမတို့ ကားတန်းကို အတိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရပါတယ် ။ တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကိုတော့ အကြမ်းဖက် လူရမ်းကားတွေ လို့သာ ခေါ်ရမှာပါဘဲ .... ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့မှာ ဓါးတွေ ၊ သစ်သားတုတ်တွေပါလာပြီး ကျမတို့ ကားတန်းကို တိုက်ခိုက်ကြတယ် ။ ပြီးတော့ ကျမတို့ အဖမ်းခံရတယ် ။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အတိုက်ခိုက်ခံရသူတွေက အဖမ်းခံရပြီး တိုက်ခိုက်သူတွေကတော့ လွတ်သွားကြတယ် ။ ဘယ်ကို လွတ်သွားသလဲတော့ ကျမလည်း မသိဘူး ။ ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေအတွက် ဘာတစ်ခုမှ အပြစ်ပေးခံရခြင်း မရှိဘဲကို လွတ်သွားကြတာ ။
အဲဒီအဖြစ်အပျက် အပြီးမှာ ကျမရော ၊ ကားတန်းမှာပါတဲ့တခြားလူတွေရော ထောင်ချခံရတယ် ။ အဲဒီကိစ္စဖြစ်တာ ၂၀၀၃ မေလ မှာပါ ။"
သြဇီ မိန့် ခွန်းမှ
ဆီးဂိမ်းတွင် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ပုဂ္ဂလိကများထက် ပိုကောင်းအောင် ဆောင် ရွက်ပေး မည်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးပြောကြား
ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ။ ။ ဆီးဂိမ်း ပွဲတော်တွင် အင်တာနက် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၏မြန်နှုန်းထက် မ လျော့ကျစေ ရန် ဆောင်ရွက်ထား ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သိရသည်။
ဆီးဂိမ်းကျင်းပပြုလုပ်မည့် နေရာများဖြစ်သည့် ရန်ကုန်၊ နေ ပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ငွေဆောင် အစရှိသည့်နေရာများတွင် ဝိုင် ဖိုင်စနစ်ဖြင့် အင်တာနက်အသုံး ပြုမှုများကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနှစ် ခုဖြစ်သည့် Redlink နှင့် ရွှေသံ လွင်ကုမ္ပဏီတို့က မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ် ငန်းနှင့် နေရာ ခွဲဝေ ၍ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိ ရသည်။
''ဆက်သွယ်ရေးက လေးနေ ရာစလုံးမှာ ဝိုင်ဖိုင်စနစ်ပေးမယ်။ နေပြည်တော် မှာတော့ နေရာတော် တော်များများမှာပေါ့။ ဇေယျာ သီရိ၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားရွာေ တွ ပြီးရင် Social Zone စတဲ့နေရာ တွေမှာ သုံးနိုင်မယ်။ အင်တာနက် မြန်နှုန်းကိုတော့ အတိအကျသတ် မှတ်ထားတာမျိုးမရှိဘူး။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေထက်တော့ လျော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကစားကွင်းမှာ ဝိုင်ဖိုင်သုံးတာ အားလုံးစမ်းသပ် ပြီးသွားပါပြီ''ဟု မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါမြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းမှ အင်တာနက်အသုံး ပြုခွင့်ကို ဝန်ဆောင်မှုနှစ်မျိုးပေး ထားပြီး အများပြည်သူအသုံးပြု နိုင်သည့် အင်တာနက်ကို Security စနစ်ခံထားမည်မဟုတ် ဘဲ ဆီးဂိမ်းနှင့်သက်ဆိုင် သည့်လုပ် ငန်းပိုင်းအသုံးပြုခြင်းကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ် သည်ဟု သိရသည်။
''အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြင့် အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ် ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသိပ် များလာတဲ့နေရာမှာတော့ အင် တာနက်လိုင်းကျမှာပါ။ မီဒီယာ တွေ တခြားအချက်အလက်တွေ ပေး ပို့မှုမြန်အောင်လို့ နှစ်မျိုးခွဲ ခြား ထားပါတယ်''ဟု ယင်းက ထပ်မံ ပြောသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ် ငန်းမှ ပြန်လည်ခွဲပေးသည့် အင် တာနက် Bandwitchကို ပုဂ္ဂလိ ကအင်တာနက်ဆားဗစ်ပရိုဗိုက် တာကုမ္ပဏီများ မှတစ်ဆင့် ပြန် လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေရခြင်း ဖြစ် ရာ မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေး အ နေဖြင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများထက် ပိုမို လျင်မြန်အောင်ဆောင် ရွက်ပေး နိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
လတ်တလောမှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာတက်နေတဲ့ န၀ရတ်ရဲ့ သတင်းအချို့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမကိုအားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ စိုးရိမ်နေကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီသတင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ခန့်က စစ်ဆေးထားတဲ့ စစ်ချက်ဖြစ်နေတာကြောင့် စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိဘူးလို့ သိရပေမယ့် သူမကို သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ ဒါဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်း၊ အချိန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ သူမအတွက် မစိုးရိမ်ကြဖို့နဲ့ သူမဟာ ခု နေအိမ်မှာပဲရှိနေပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အကြောင်း၊ အကယ်ဒမီပွဲအတွက် ရင်ခုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။
န၀ရတ်ဟာ မကြာခင်မှာကျရောက်တော့မယ့် အကယ်ဒမီပေးပွဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ၂၀၁၂ ထဲမှာ ကားပြိုင်နှစ်ကားနဲ့ ပရိသတ်တွေကြား ပွဲဆူနေသူမို့ မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ ‘အကယ်ဒမီကတော့ တိမ်မင်းသမီးလဲရင်ခုန်တာပဲ။ မွေခံထိုက်သူလဲ ရင်ခုန်တာပဲ။ တိမ်မင်းသမီးကတော့ ပိုပြီးတော့ရစေချင်တာပေါ့နော်။ လူအများကြီးလဲထည့်ထားတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးမှာလဲ ပရိသတ်ကြည့်ရတာအားရတဲ့ ကားတစ်ကားပေါ့။ ဒီကားလေးထဲမှာ ရခဲ့တယ်ဆိုရင် အစ်မ ရိုက်ရကျိုးနပ်တယ်ပေါ့။ ဒါပြည်သူတွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ကြိုးစားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ပြသမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲ ကျေနပ်တယ်။ ရုံတင်တဲ့အခါမှာလဲ န၀ရတ်နဲ့ထပ်တူခံစားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။အကယ်ဒမီရရ၊ မရရ၊ အမြတ်ရရမရရအသာထား ဇာတ်ကားတစ်ကားအနေနဲ့ ဒရမ်မာကားကိုအားပေးတဲ့အတွက်၊ လက်ခံတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးက သူတို့နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ဖန်တီးမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲ ပိုပြီးတော့ အားရှိတယ်။ ဒီကားကို မရိုက်ခင်တုန်းက အရမ်းစဥ်းစားရတယ်။ ဇာတ်ကလဲ မင်းသမီးဇာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်မှပဲရမှာ။ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံးပိုက်ဆံစုတယ်။ ပြီးတော့ ပါမဲ့သူတွေကို လျာ၊ လျာပြီးတော့မှအားလုံးကွက်တိပဲရွေးထားတဲ့သူတွေက အားလုံးလဲအဆင်ပြေတယ်။ အားလုံးအထစ်အငေါ့မရှိဘဲ အဆင်ပြေတယ်။’လို့ ပြောပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေတစ်ဦးချင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပိုင်းကိုလည်း သူမက ‘တိမ်မင်းသမီးတစ်ဖွဲ့လုံးကောင်းလို့လဲ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးကောင်းသွားတာပါ။ ပြီးတော့ ဒီဇာတ်လေးက အစ်မရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်က ပေးတဲ့ဇာတ်လေးပေါ့။ သူတို့ပြောလို့ ကိုယ်ကသိတာဆိုတော့ သူတို့ကိုလဲ ကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ရခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီပရိသတ်ကို အစ်မလိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးဆပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ အစ်မကိုယ်တိုင်ရိုက်ရတာကလဲ ဇာတ်ရုပ်၂ ရုပ်လုံးကကောင်းတယ်။ အစ်မလုပ်ရမလား။ ညီမလုပ်ရမလား ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ၂ ခုစလုံးကကောင်းနေတယ်။ စာရေးဆရာမကလဲ ဗီဒီယိုဆို မရောင်းဘူး။ ရှေ့မှာလဲ ၃ ဦးလောက်လာဝယ်သေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ပဲ မျှော်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ဝယ်ခဲ့တာပေါ့။ ရုံမှာကြည့်တဲ့သူတိုင်း သိပါတယ်။ လာကြည့်တဲ့သူတိုင်းပြန်ထွက်လာရင် မျက်လုံးလေးတွေမို့အစ်နေတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ဒီကားလေးဟာပရိသတ်အတွက် အစ်မရဲ့ အနုပညာတာဝန်ကျေတယ် လို့ပြောလို့ရတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ။ ပါတဲ့ဇာတ်ကားနှစ်ကားလုံးက ပင်ပန်းတယ်။ မွေခံထိုက်သူမှာဆိုလဲ ချိုင်းထောက်နဲ့အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ သူတောင်းစားမအခန်းနဲ့ သားက ဆွမ်းခံကျွေးတဲ့ထမင်းကို ထိုင်စားတယ်။ တိမ်မင်းသမီးကျတော့လဲ လှလှပပ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ဇာတ်အိမ်တစ်ခုလုံးက ဟာကွက်မရှိအောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ တစ်ဖွဲ့လုံးကိုရစေချင်ပါတယ်။ တိမ်မင်းသမီးကိုလဲရစေချင်တယ်။ မွေခံထိုက်သူကိုလဲ ရစေချင်တယ်။ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်ချင်တယ်။ ကျော်ဟိန်းသမီးဆိုတော့ လောဘကြီးတယ်။ အားလုံးကိုရစေချင်ပါတယ်တဲ့။ အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ၀တ်မဲ့ဝတ်စုံကိုတော့ တိမ်မင်းသမီးတစ်ကားလုံးကိုချုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာမလတ်ကစီစဉ်ပေးမှာပါ။ မိတ်ကပ်လဲအဲလိုပါပဲ။ ဦးမာပဲပြင်ပေးမှာပါ။ ပိုးထည်ကတော့ မလတ်ကိုပဲစီစဉ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ လေ။ အစ်မ၀ယ်လာတဲ့ဟာလေးတွေလဲရှိတော့ သူ့ဆီပို့ထားတယ်။ သူပဲစီစဉ်ပေးမှာပါ။’ လို့ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ။်
iOS7သို့ Firmware Activate ပြုလုပ်သူများ iCloud အကောင့်အား ဂရုစိုက်သင့်
iOS7သို့ Firmware Activate ပြုလုပ်သူများ အနေဖြင့် Activate ပြုလုပ်ရာတွင် iCloud အားအသုံးပြု၍ Activate ပြုလုပ်ပါက ဂရုစိုက်သင့်ကြောင်း သိရသည်။ iOS7၌ Firmware Activate ပြုလုပ်ရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သူ အချို့၌ iCloud အကောင့်မှတစ်ဆင့် Login ဝင်ကာ Activate ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Activate ပြုလုပ်ပြီး၍ ပြန်ထွက်သောအချိန်တွင် iCloud အကောင့်အား Log Move ဖြင့်ပြန်လည်ထွက်လာပါက မိမိတို့၏ဖုန်းများအတွက် နောက်တစ်ကြိမ် Firmware Activate ပြုလုပ်ရာ၌ ဖုန်း Lock ကျသော ပြဿနာများ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ X-code မိုဘိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူ ကိုပြည့်ဖြိုးမှ ပြောပြရာတွင် “ iOS7 မှာ Firmware Activate ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ iCloud အကောင့်ပါ။ Firmware ကို Activate ပြုလုပ်ချိန်မှာ iCloud ကနေ Login ဝင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် Activate ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာ iCloud အကောင့်ကို Logout လုပ်ပြီးပြန်ထွက်လာရပါမယ်။ အဲဒီလိုမျိုး Log out မလုပ်ဘဲနဲ့ တစ်ခါတည်း တန်းပြီးတော့ Logmove လုပ်ပြီးထွက်လာခဲ့ လိုက်ရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို Firmware Activate ပြုလုပ်ချိန်မှာ ဖုန်းအတွက် ကိုယ်ပထမသုံးခဲ့တဲ့ iCloud အကောင့်ရဲ့ Password ကိုပြန်တောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြန်တောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကပထမ iCloud ရဲ့ပက်စ်ဝက်ဘ်ကို မသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီဖုန်းဟာ အမြဲတမ်းအတွက် Lock ကျသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Activate ပြုလုပ်ချိန်မှာ iCloud အကောင့်ကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။ ယင်းကဲ့သို့ Lock ကျသွားပါက ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် iPhone 4S များထိသာ ပြန်လည်ပြုလုပ် နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။ -
တကယ်ပါ။ ကျနော့ အကောင့်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိတယ်။ သိပ်မခင်ဘူး။ သူက ရှော့ပင်ထွက်တဲ့ အကြောင်းတွေ Status တင်တယ်။ အိမ်မှာပျင်းလိုက်တာ ဆိုပြီးတော့ တင်တယ်။ ပြီးတော့ သူအစားစားပြီ ဆိုရင် ဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်ပြီးမှ အရမ်းကြိုက်၊ အရမ်းခိုက် ဆိုတဲ့ စာမျိုးနဲ့ တင်တယ်။ သူ့အိမ်ရှေ့ က ပေါက်နေတဲ့ ပန်းတွေက လှလို့ပါဆိုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ရှာတယ်။ သူ အားပေးတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် အကြောင်း ကိုတင်တယ်။ ပြီးတော့ အသဲကွဲ ကဗျာလေးတွေကို Page တွေကနေ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် တင်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော် သူ့ အကြောင်းကို တော်တော်သိသွားပြီ။
နေတဲ့ မြို့ ၊ ရပ်ကွက် ကိုသိပြီ။ မွေးရပ်ဇာတိကို သိပြီ။ ကိုယ်ကလည်း ရန်ကုန်မှာ ခြေရာမထပ်ပေမယ့် တိုက်ဆိုင်လို့လား မသိ။ အဲ့ပန်းပင် ရှိတဲ့နေရာကို မှတ်မှတ်ရရသိ။ ပြီးတော့ သူကြိုက်တဲ့ အစားအစာကို သိသွားပြီ။ နောက်ပြီးတော့ သူရဲ့  နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကို သိသွားပြီ။ သူ အသဲကွဲတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရှိတာ သိသွားပြီ။ ရှော့ပင်သွားရင် ဘယ်နေရာသွားတယ် သိသွားပြီ။ ဘယ်နေ့သွား တတ်တယ် သိသွားပြီ။ အဲဒါ စကား လုံးဝ မပြောရသေးဘူးနော်။ အကြောင်းအရာ အတော်များများ သိနေပြီ။ အကြောင်းက သိသလောက် နီးပါးရှိနေတဲ့ Social Media မှာ ကျနော်တို့လို စာရေးတဲ့ သူတွေက စကားပြောကောင်းတယ်လေ။ လွယ်လွယ်နဲ့ခင်သွားတာပေါ့။ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ အချက်အလက်တွေ အတော်များများ သိတာမို့ လက်တည့်စမ်းပြီး အကောင့်လေးဘာလေး တွေး တိုးစမ်း Hack ကြည့်လိုက်တာ ညံ့လိုက်တဲ့ Security မေးခွန်း မွေးရပ်ဇာတိ ကို အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပေးတာနဲ့ အကောင့်က လက်ထဲကို ရောက်ရော။ (နောက်တော့ ဆုံးမ သြဝါဒ ချွေပြီး ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
အစရှိသဖြင့် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် အားလုံး ပေးထားပါတယ်။ အဲဒါတွေ သတိကော ထားမိကြရဲ့ လား။ Privacy တစ်ခု ကိုယ်ကိုတောင် ချမှတ်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ အပြင်သွားမယ့် အကြောင်းအရာလေး၊ ရှော့ပင်သွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုရင် ခင်ရာမင်ရာ သူငယ်ချင်းအရင်းတွေကိုပဲ သိစေတာမျိုး၊ ဓာတ်ပုံတွေ တင်ရင်လည်း မြင်စေချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲ မြင်စေတာမျိုး၊ အချို့  လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကို အကောင့်မှာ လုပ်တဲ့အခါကျ အားလုံးကိုမြင်စေဖို့ Public ပေးတာမျိုး အစရှိသဖြင့် ပြုလုပ်တတ်ဖုိ့ လိုအပ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ... ညစ်ပတ်သော အစိုးရကို တော်လှန်ရန် .. ( ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြရန် ) လိုအပ်လာပါလျှင် ... ဤပုံကဲ့သို့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိကြပါဦးမည်လော
အကယ်၍ ... ညစ်ပတ်သော အစိုးရကို တော်လှန်ရန် ..
( ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြရန် )
လိုအပ်လာပါလျှင် ... ဤပုံကဲ့သို့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု
သူတို့ ( အစ္စလာမ်တွေကကော ) ဒီလိုမျိုး လုပ်ရဲပါဦးမည်လော ...။
၈၈ ဟာ သိပ်လှခဲ့တယ် ... မကြုံဖူးလောက်တဲ့ ပြည်သူ့ အင်အား
စုမိသွားခဲ့တယ် ... ဘာသာမခွဲဘူး ... လူမျိုးမရွေးဘူး ... တိုင်းရင်းသား
ပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံက တညီတညွတ်တည်း အာဏာရှင်ကို
တော်လှန်ခဲ့ကြတယ် ... အောင်မြင်မှုလည်း ရခဲ့ပါတယ် ... ပြည်သူတွေရဲ့
ရင်ထဲကိုလည်း ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓာတ်ကို သွင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ် ...
နောက်ပိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အားနည်းမှု နဲ့ အကောက်ကြံ
ခံရမှု တွေကြောင့်သာ ... အချိန်ကိုက် အစိုးရ မဖွဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ ...
ခုတခါ ... နာဂစ်လော ပြင်မပေးဘူး ဆိုရင် ... ပြည်သူအားလုံး
ဖြေစရာ မလိုပါဘူး ... စုမိဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး ... အစ္စလာမ်
ဘာသာဝင်တွေက ငါတို့ဘက် ဦးလှည့်တော့မှာပဲ ဆိုပြီး
စိုးရိမ်မှုနဲ့ အသင့်အနေအထား ဖြစ်နေကြမှာပါ ... ဒီထဲကို
ပါမှာ မဟုတ် ... ဒီလို ဖြစ်အောင် သေချာ လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး
ဘာသာရေးး မီးကို မွှေးထားခဲ့တာလေ ... အဲဒီမီး ဘယ်သူ
မွှေးတာလဲ ... ကဲ ကျနော် ပြောစရာမှ မလိုတော့တာ ...
ခုလည်း မွှေးနေတာပဲ ... နောက်လည်း မွှေးနေဦးမှာပဲ ...
အလိုတော်ရိ အပေါင်းနှင့် ... ပညာရည်နိမ့်ပါး ...
ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်စွမ်း အားနည်းတဲ့ ... လူတစုက ဒါကို
ဒီ ဘောင်းဘီချွတ် အာဏာရှင် အစိုးရ ကို အမြစ်ကလှန်
မဖြိုလှဲ နိုင်သေး သရွေ့ ... ဒီမီးစ က မငြိမ်းနိုင်ပါဘူး ...
( ၈၈ တုန်းက ဓာတ်ပုံလေး ကိုပဲ လွမ်းတယ် )
credit --> Bran Sai
မန္တလေး ကန့်သတ်ဧရိယာများတွင် ယာဉ်ရပ်နားခ ကြာချိန်အလိုက် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်
ဆိုင်ကယ်မြို့တော်ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့တော်တွင် အဓိကစည်ကားရာ နေရာများ၌ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုများ မဖြစ်စေရန် ယာဉ်ရပ်နား ကန့်သတ်နယ်မြေ ဧရိယာအတွင်း ယာဉ်များ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နားပါက ကြာချိန်အလိုက် သတ်မှတ် ယာဉ်ရပ်နားခ များကို ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှစတင် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အခွန်ဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်ရပ်နား ကန့်သတ်နယ်မြေများတွင် တစ်နာရီအတွင်း ရပ်နားပါက လက်ရှိ ကောက်ခံနေသည့် နှုန်းထားများအတိုင်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလျှင် ၅၀ ကျပ်၊ မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးလျှင် ၁၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပြီး တစ်နာရီထက် ကျော်လွန် ရပ်နားပါက ကျော်လွန်သည့် နာရီများအတွက် တစ်နာရီလျှင် ဆိုင်ကယ်နှင့် မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးလျှင် ၁၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထပ်တိုး ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကာ ယာဉ်နှစ်ထပ်ရပ်သည့် ယာဉ်များကို Tow Truck ယာဉ်ဖြင့် ဆွဲယူ၍ ယာဉ်မောင်းနှင်သူကို တရားစွဲဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းထံမှ သိရသည်။
“အရင်တုန်းက တစ်နေကုန်ရပ်လည်း ကျပ်ငါးဆယ်ကနေ တစ်ရာအတွင်း ကောက်တာ။ ခုတော့ တစ်နာရီတိုး ရပ်တိုင်း ကျပ်တစ်ရာနှုန်း တိုးသွားမယ်။ ယာဉ်တွေကို Tow Truck နဲ့ ဆွဲတာကတော့ ဧရိယာထပ် တိုးလိုက်တာ။ ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်း ကားပေါ်တင်မယ်။ အဓိကကတော့ ယာဉ်တွေကို ကြာကြာမရပ်စေချင်လို့ပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မန္တလေးမြို့တော်တွင်း ယာဉ်ရပ်နား ကန့်သတ်နယ်မြေများနှင့် ဖြူ၊ နီကျားများတွင် စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်နားထားသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို Tow Truck ခုဖြင့် ဆွဲယူ ရှင်းလင်းခြင်းကို ယခုဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်က စတင်ခဲ့ပြီး မန္တလေးဈေးချိုတော် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် အဓိကထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလျှင် ဒဏ်ငွေငါးသောင်း သတ်မှတ်ထားကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ စက်ရုံနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်ရပ်နားခ တိုးမြှင့် ကောက်ခံမည့် ယာဉ်ရပ်နား ကန့်သတ် နယ်မြေများမှာ ၈၃ လမ်း (၂၆ လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ ကြား)၊ ၈၂ လမ်း (၂၆လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ ကြား)၊ လမ်း ၈၀ (၂၇ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား)၊ လမ်း ၃၀ (၇၄ လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းကြား)၊၂၆ လမ်း (လမ်း ၈၀နှင့် ၈၄ လမ်းကြား)၊ ၃၅ လမ်း (လမ်း ၈၀နှင့် ၈၄ လမ်းကြား) တို့ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဌာန ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
“နေ့လယ်၊ နေ့ခင်းဆိုရင်တော့ ယာဉ်ကြော ရှင်းပါတယ်။ ညနေပိုင်း ဆိုရင်တော့ တော်တော်ရှုပ်တယ်။ တစ်နာရီကျော်သွားတိုင်း ရပ်နားခ ကောက်မယ်ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဈေးကြီးရင်တော့ ဘယ်သူ မှပေးချင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ကြာကြာလည်းရပ်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး” ဟု ၂၆ လမ်း (၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား) တွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် တိုင်းရင်း ဆေးဆရာမတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်းအပြင် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း မန္တလေး စည်ပင်သန့်ရှင်းရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူထားသော စားသောက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်နှင့် ကုန်စုံဆိုင်များရှေ့တွင် ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ယာဉ်များ စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်နားခြင်း၊ ယာဉ်ကြောနှစ်ထပ် ရပ်နားခြင်းများ ပြုလုပ်ထားပါက မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာရေး ကော်မတီ၏ နည်းဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည့် အပြင် ဆိုင်ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူသွားမည် ဖြစ် ကြောင်း အဆိုပါ သန့်ရှင်းရေးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မိတ္ထီလာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ယခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ပွားသော ပဋိပက္ခကြောင့် ချမ်းအေးသာယာ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ခဲ့သော မီးဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မြေနေရာများ ပြန်လည် ချထားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မိတ္ထီလာ မီးဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည် နေရာ ချထားရာ၌ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား ခိုင်မာပြီး အရှုပ်အရှင်းကင်းသည့် အိမ်ထောင်စု ၉၃ စုကို ပေ ၄၀-၃၀ မြေကွက်များကို ဦးစွာချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ ဒုက္ခသည်များသည် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် နေထိုင် ခဲ့ရသည်မှာ အချိန် ရှစ်လကျော် ကြာပြီဖြစ်၍ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် လူမှုရေး အခက်အခဲများ နေ့စဉ် ပိုမိုများပြားလာလျက် ရှိခြင်းကြောင့် ဒုက္ခသည်များသည် မြေနေရာ ပြန်လည်နေရာ ရရှိရေးကို မျှော်လင့်လျက် ရှိရာ မြေကွက်များ ပြန်လည် ချပေးတော့မည်ဟု သတင်းများ ကြားနေရကြောင်း သာသနာရက္ခိတ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှ ဒေါ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးရှင်းပြတာပါဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူဇာ
ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံး ရှင်းပြတာပါ နောက်ထပ် ဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာ အကြောင်းအရာ ကိုမှ ကျမ ပြန်ရှင်းပြ မှာ မဟုတ်ပါဘူး လူ့အခွင့်အရေး ကို တကယ်နားလည်လေးစားမယ်ဆို ရင် စာနာစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အသုံးပြုကြတာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်ဘူးလား ကျမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်များ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ပါခဲ့တဲ့ အနုပညာ မောင်နှမ များရှင် ကျမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက် ရခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ဒီနေရာကနေ ကျမ တောင်းပန်ပါတယ် ကျမ ကိုနားလည်ပေးကြပါ ဒီကိစ္စမှာ ကျမ ကိုကူညီဖေးမခဲ့တဲ့ သူများ နဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သူတွေအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလုံး မင်္ဂလာရှိသော သူများ ဖြစ်ကြပါစေရှင်။
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက် အပေါ်အစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်ပြောကြားမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမူဆောင် အဖွဲ့က သဘောထားထုတ်ပြန်
ရတနာပုံသတင်းစာ၊ ဒီဇင်ဘာ (၂) ရက်နေ့ထုတ်၊ အတွဲ (၂၂)၊ အမှတ် (၂၁၈)
မြဝတီသတင်းစာ၊ ဒီဇင်ဘာ (၂) ရက်နေ့ထုတ်၊ အတွဲ (၃)၊ အမှတ် (၂၂၈)
၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများ ၀င်ထွက်ဆိုက်ကပ်မှု ၁၂၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများ ၀င်ထွက်ဆိုက်ကပ်မှု ၁၂၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်မှ ထုတ်ပြန်သော စာရင်းများအရ သိရသည်။
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများ ၀င်ထွက်ဆိုက်ကပ်မှုမှာ ၉၇၁ စီးသာ ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ ၂၁၉၆ စီး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ဆယ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောဝင်ထွက် ဆိုက်ကပ်မှုက ၁၂၂၅ စီး တိုးတက်ဆိုက်ကပ်ခဲ့ပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၂၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ဆိုက်ကပ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်" ဟု မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်မှ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးမြသန်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်ပို့ကုန်များ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသည် ထီးတန်းကမ်းနားဒေသမှ သံလျက်စွန်း ကမ်းနားဒေသအတွင်း နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောများ ၀င်ထွက်ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ခံတံတား ၁၈ စင်း၊ ကုန်းတွင်းကုန်သေတ္တာစခန်း သုံးခုဖြင့် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများ ၀င်ထွက်ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့် ဆိပ်ကမ်းရှစ်ခု၏ သင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်မှုမှာ ဆူးလေဆိပ်ကမ်းတွင် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းတွင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ MITT တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ MIP တွင် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ HPT တွင် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗိုလ်အောင်ကျော် ဆိပ်ကမ်းတွင် ၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ HOB ဆိပ်ကမ်းနှင့် MIPL ဆိပ်ကမ်းများ ၆ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများတွင် ကုန်သေတ္တာ ကိုင်တွယ်နိုင်သော ဆိပ်ကမ်းအဖြစ် ဗိုလ်အောင်ကျော်ဆိပ်ကမ်း၊ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း၊ အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း သီလ၀ါ စသည်ဖြင့် ကုန်သေတ္တာ ဆိပ်ကမ်းလေးခုရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများသို့ ၀င်ရောက်သည့် သင်္ဘောများ၏ ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ မှာ ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောများဖြစ်ပြီး ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အထွေထွေ ကုန်ပစ္စည်းတင်သင်္ဘော၊ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မော်တော်ယာဉ်တင် သင်္ဘောများ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
MITT ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသည့် နိုင်ငံတကာ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောတစ်စီးအား တွေ့ရစဉ်
နိုဝင်ဘာ၃ဝရက်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမ ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့် နိုင်ငံ တော်တည်ဆောက်ရေးတွင် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့ အစည်းများ၏ အခန်း ကဏ္ဍ ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ၌ နိုင်ငံ တော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ''မိမိတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အစိုးရနှင့် ပြည်သူကြား၊ အင်စတီကျူးရှင်းများနှင့် ပြည် သူလူထုအကြား၊ နိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအကြား ကာလရှည်ကြာ လျော့ပါးခဲ့ရသည့် အပြန်အလှန်ယုံကြည် မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးသည် နိုင်ငံရေးလိုအပ် ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း'' ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည် ကို တွေ့ရသည်။
ယင်းအပြင် ''ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးအတွေ့ အကြုံများအရ မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် သံသယများ မြင့်တက်ခဲ့ရသကဲ့သို့ အချင်းချင်း ယုံကြည်မှုလျော့ပါး ခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုအချက်က ယနေ့မိမိတို့ အကောင်အထည် ဖော်နေသော နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများနှင့် အမျိုး သား နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်သစ်များ အရှိန်အဟုန်နှင့် တိုးတက် မှုရစေရန်အတွက် ဖန်တီးသည့်နေရာတွင် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်အနေဖြင့် တည်ရှိနေဆဲ ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း'' ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည် ကို တွေ့ရသည်။
ထိုသို့ အချင်းချင်းအကြား ယုံကြည်မှုနိမ့်ပါးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ တွင် မြင်တွေ့ရလေ့ရှိသော အားနည်း ချက်များတွင် ''ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး မှန် ကန်သည့်လုပ်ရပ်များဖြင့် ကြိုးပမ်းမှုများကိုပင် လိုရာဆွဲ ပုံဖော်ခြင်း၊ အစဉ်အမြဲရှင်သန်နေရန် လိုအပ်သောအယူ အဆသစ်များ၊ အတွေးအခေါ်သစ်များကို လက်မခံဘဲ ရှေးရိုးကျပြီး အစွန်းမလွတ်သည့် အတွေးအခေါ်ဟောင်း များကို ကိုင်စွဲထားလေ့ရှိခြင်း၊ အထွေထွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ အားနည်းချက် များ၊ လိုအပ်ချက်များကို အဆိုးမြင်အပြစ်ပြောဆိုသည့် ရပ်တည်ချက်များ ထားရှိခြင်း၊ အချင်းချင်း သတင်းအချက် အလက်များ ဖြန့်ဝေလိုမှုမရှိဘဲ သတင်းထိမ်ချန်ထားပြီး အသာစီးရရှိရန် ကြိုးပမ်းသည့်အတွက် ပွင့်လင်းမျှတ သော ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေ ခြင်းဆိုသည့် အားနည်းချက်များပင်ဖြစ်'' ဟု ဖော်ပြထား သည်ကို တွေ့ရပေသည်။
မှန်ပါသည်။ အစိုးရနှင့် ပြည်သူအကြား ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေမှုသည် သမ္မတပြောကြားသလို နိုင်ငံရေးလို အပ်ချက်တစ်ရပ်ထက်ပင် မကပေ။ နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက် ၏ အဓိကအချက်တစ်ရပ် ဖြစ်နေသည်။ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ထက်ပိုပါသည်ဟု ပြောရပါမည်။ ဒါကြောင့်ပင် အစိုး ရနှင့် ပြည် သူကြား တွင် ယုံကြည်မှုကို လွယ်လွယ် ဖြင့် တည်ဆောက် မရနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
သမ္မတ၏ မိန့်ခွန်းတွင် ယုံကြည်မှုနိမ့်ပါးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ တွင် မြင်တွေ့ရလေ့ရှိသော အားနည်းချက်များကို ထည့် သွင်းပြောကြား သွားခဲ့သလို အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အခြားအဆက် အစပ် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အားနည်းချက်များကို လည်း ဖော်ထုတ်တင်ပြ သင့်ပါလျက် မဖော်ထုတ် မတင်ပြနိုင်ခဲ့ သည်ကို တွေ့ရသည်။ အစိုးရနှင့် ပြည်သူကြား ကောင်း တာပြောပြော၊ ဆိုးတာပြောပြော၊ ကောင်းတာလုပ်လုပ်၊ ဆိုးတာလုပ်လုပ် သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ သူ့ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်သည်။
စည်းကျော်ဘောင်ကျော်ဖြစ်လာလျှင် တည် ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူရုံသာ ရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ သည် ထိုအတိုင်း ကျင့်ကြံရုံသာရှိ သည်။ ပြည်သူလူထုကို နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားဟောရသော အလုပ်သည် အစိုးရအလုပ် မဟုတ်ပေ။ အစိုးရ ထိုသို့ပြောဆိုနေခြင်း ကိုယ်နှိုက်ကပင် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့် လွဲချော်နေခြင်းဖြစ် သည်။
အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကောင်းသောအစိုးရဖြစ် ရန်သာ အားထုတ်နေရ မည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းသောအစိုးရ ဖြစ်မှသာ ကောင်းသောပြည်သူလူထု၊ ယုံကြည်မှုမြင့် မားသော ပြည်သူလူထု ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင် မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းကြောင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ လှိုင်းကြီးမည်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့၌ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများတွင် လှိုင်းကြီးမည် ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အရှိန်ကြောင့် မွန်-တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဌာနက သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်သည်။
ယခုတစ်ကြိမ် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း အခြေအနေအထိ ရောက်ရှိပါက ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အတွင်း ပဉ္စမမြောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မုန်တိုင်း ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဆိုသည်။
လာမည့် နှစ်ရက်အတွင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကြား မိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ခန့်မှန်းထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်း အတွင်းကလည်း ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း လီဟာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘက်ခြမ်းသို့ ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။
လတ်တလော ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှ အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာရဲ့ ဖြေရှင်းချက်
ပရိတ်သတ်များရှင် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း FB စာမျက်နာပေါ်သို့ ရောက်လာသည့် ကျမ နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ပီး ကျမ မိသားစု မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအပါအဝင် ကျမကို သံယောဇဉ် ရှိကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များ အားလုံး စိတ်အနှောက်အရှက် များစွာဖြစ်ရသလို ကာယကံရှင် ကျမကိုယ်တိုင်လဲ အတိုင်းအဆမရှိ စိတ်ထဲမှာ ထိခိုက် နာကျင်ရပါတယ် Moe Zay Nyein ကိုကျမ မသိပါ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုလုပ်ရပ်ကို လုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတာကိုလည်း ကျမ နားမလည်ပါ သူတင်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာများကို မှန်ကန်ပါတယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မထောက်ခံထားသလို လုံးဝ အမှန်လို့လဲ မယူဆသင့်ပါ အခြေအနေမှန်ကို သေချာမသိဘဲ ဝင်ရေးထားတဲ့ comment နှစ်ခုလောက်ကို မြင်ရတဲ့အခါ ကျမ တော်တော် ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ် အနုပညာရှင်တွေဟာ စည်းကမ်းမရှိ အရှက်အကြောက်မရှိ ဥပဒေ ဘောင်တွင်း တကယ် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဒီတိုင်းကြည့်မနေဘဲ ထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးခဲ့တာ လူတိုင်းလဲသိကြပါတယ် nobody perfect ဆိုပေမဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့သူတွေလဲ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် သေချာတာက ကျမဟာ perfect မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါဘဲ ကျမ မှာ အားနဲချက် ချို့ယွင်းချက်တွေ အများကြီးရှိသလို အမှားမရှိ အပြစ်ကင်းတဲ့ လူမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး ကျမ အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပါပြီ လက်ရှိမိဘ တွေနဲ့ တူတူနေပြီး ကျမ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပညာနဲ့ လူ့ပါတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း မှာ ရိုးသားစွာ နေထိုင်ပြီး တင့်တယ်အောင် ရပ်တည်နေပါတယ် အခုကိစ္စမှာ ကျမကို မရည်ရွယ်လဲ ကျမ ဓါတ်ပုံ နဲ့ ခေါင်းစဉ်တတ် အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျမ အနေနဲ့ အင်မတန် ခံရခက်ပါတယ် နိုင်ငံရေး နားလည်သည့် အသိ ဥာဏ်မျိုး မရှိတဲ့ အတွက် နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံ့အရေးကိုတော့ ကျမ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ မှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျမ နဲ့သက်ဆိုင်သော ကိစ္စ များကိုဘဲ ကျမ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ကျမ အလုပ်ကို လေးလေးစားစား လုပ်ပါတယ်ံဘယ်သူ့ကိုမှ အနိုင်မယူ ဘ်ာသူ့ကိုမှ အရူံး မပေး Win win situation ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါတယ် ကျမ life ကို Day by day ဖြတ်သမ်းပါတယ် ကျမ ပျော်ပျော်နေတတ်ပေမဲ့ ဘယ်တုန်းက မှ ပေါ့ပေါ့ မနေခဲ့ပါဘူ့းကျမ life perfect မဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ကျမကြောင့် ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပျက်ဆီး ဆုံးရူံးအောင် ဆိုးဝါးတဲ့ အမှားမျိုး အပြစ်မျိုး မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီအသက်မရွယ်ထိ ဒီနေရာမှာ ကျမ ရပ်တည်ခွင့် ရနေတာ လူတိုင်းအမြင်ပါဘဲ လိပ့်ပြာသန့်တဲ့အတွက် ကျမ ဘဝက မင်္ဂလာ ရှိပါတယ် MZN ရဲ့အမှန်တရားဖော်ထုတ်တဲ့ ကိစ္စက ကျမတင်မက အကြောင်းအရာ ထဲမှာနံမည်ပါတဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် ကျမရဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေ ကိုပါ အများကြီး ထိခိုက်နစ်စေပါတယ် မိသားစုတွေ ရှိကြတဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန် အလှန်လေးစားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ဆီးစေပါတယ် သံသယ တွေနဲ့ ရင်းနှီးမူ ကို ဒုက္ခ ရောက်စေပါတယ် အဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိဘဲ အများအတွက် နစ်နာဆုံးရူံးမူကို ဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဘယ်လောက်ဘဲ ( အမှန် ) ဖြစ်နေပါစေ နောက်ဆုံးမှာ ( အမှား ) ဖြစ်စေပါတယ် ပရိတ်သတ်များရှင် MZN တင်ပြချက်မှာပါတဲ့ ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓါတ်ပုံအပါအဝင် အကြောင်းအရာ အရာအားလုံးကို ကျမ လုံးဝ လက်မခံပါဘူး အစစ်မှန်ဆိုတာကိုလဲ မယုံတဲ့ အတွက် အသိအမှတ်လဲ မပြုပါဘူး ကျမ အတွက် အချိန်က ဘဝ ပါ ဘဝကို တန်ဖိုးထားသလို အချိန်ကိုလဲ ကျမ အရမ်းတန်ဖိုးထားပါတယ် ကျမရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကိုအကုန်ခံပြီး ဒီလိုပြန်ရှင်းပြရတာ ကျမကို ချစ်တဲ့ လေးစားကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ကျမ တန်ဖိုးထားထားလို့ပါ ကျမ အတွက် နံပါတ် တစ် ဦးစားပေး အရေးပါတဲ့ လူတွေထဲမှာ ပရိတ်သတ်များ ပါပါတယ် ဆက်လျှောက်ဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ ခရီးမှာ ကျမကို လက်တွဲထားမဲ့ အဖော်ကောင်း မပါပေမဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို လက်တွဲပြီး ပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့ ကျမ ဆက်လျှောက်ချင်ပါတယ် MZH က comment တစ်ခုမှာ မကြီးစိုး စဆရ လို့ သုံးနူန်းထားပါတယ် စစ်သားသားသမီးဖြစ်လို့ ဒီအသုံးအနူံးကို ကျမ နားလည်ပါတယ် ဦး MZN ရှင် ( ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ အနဲငယ် သိထားတဲ့ အတွက် ဦးတတ်ပြီး ခေါ လိုက်တာပါ ) ဦးပြောသလို အကြောင်းအရာတွေ ချန်ထားခဲ့လို့ ဆိုပြီး မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ အတွက် ကျမ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ကျေးဇူးတင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးရှင် ဒါပေမဲ့ ဦးပြောတဲ့ အသုံးနူန်းတိုင်း ပြောရရင် ကျမ အတွက် MZN စဆရ မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အများကြီး ထပ်ရလိုက်လို့ ဒီအတွက်တော့ ဦး ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ဘယ်သူ နဲ့မှ ရေရှည် အခြေ အတင် မဖြစ်ချင်တာ ကျမ ဆန္ဒ ပါ လူမူဆက်ဆံရေးဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍ ပါ လူမူဆက်ဆံရေး မပြေလည်ရင် တခြား ဘယ်အရာ မှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ကျမ နိုင်ငံခြားမှာနေရတဲ့ အချိန်မှာ သိခဲ့တဲ့ ဥပဒေ တစ်ခု ရှိပါတယ် ဘယ်နိုင်ငံမှာဘဲ နေနေ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဥပဒေ မှာ တူညီတဲ့ ဥပဒေ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် အနုပညာရှင်များ (သို့) အောင်မြင်ထင်ရှား လူသိများသူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင်ရာတွေကို (၁) ကာယကံရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက (၂) တရားဥပဒေအရ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင် (သို့) တရားရုံးမှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက (၃) လက်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ကျုးလွန်နေသူဟု ခိုင်လုံသော သတင်းအထောက်အထား မရှိပါက ဘယ်တော့မှ လူအများမြင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြန့်ဝေ နိုင်ခွင့် မရှိဘူး ဆိုတာပါဘဲ ကျမကတော့ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အနေခက် တာမျိုး မဖြစ်စေချင် သလို ဥပဒေ နဲ့ စကားပြောရတာမျိုးတွေ အထိ လဲ အလုပ်တွေ မရူပ်ချင်ပါ အဲဒါကြောင့် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံး ရှင်းပြတာပါ
နောက်ထပ် ဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာ အကြောင်းအရာ ကိုမှ ကျမ ပြန်ရှင်းပြ မှာ မဟုတ်ပါဘူး
လူ့အခွင့်အရေး ကို တကယ်နားလည်လေးစားမယ်ဆို ရင် စာနာစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အသုံးပြုကြတာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်ဘူးလား
ကျမကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သပ်များ
နာမည်ပါခဲ့တဲ့ အနုပညာ မောင်နှမ များရှင်
ကျမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက် ရခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ဒီနေရာကနေ ကျမ တောင်းပန်ပါတယ်
ဒီကိစ္စမှာ ကျမ ကိုကူညီဖေးမခဲ့တဲ့ သူများ နဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သူတွေအားလုံးကို
အားလုံး မင်္ဂလာရှိသော သူများ ဖြစ်ကြပ်စေရှင်။
SOEMYAT THUZAR စိုးမြတ်သူဇာ ဖေ့ဘုတ်မှ
ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ ထုတ် Digital Life နည်းပညာဂျာနယ်၏ အတွဲ ၂ အမှတ် ၃၀
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုမည့် အချက်များကို ကြိုတွက်ထားပြီးဖြစ်ကာ အာဏာခွဲဝေရေးတွင် တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ်အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် အာဏာပြန်အပ်မည်ဟု သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတု ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော "တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွင် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ" ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများကို အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ရှင်းပြစဉ် ယခုကဲ့သို့ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက "နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ သူတို့ (တိုင်းရင်းသားတွေ)ဘာကို တောင်းဆိုမလဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ကြိုပြီးတွက်ထား ပြီးသား။ ကျွန်တော်တို့က ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အကြိမ်နှစ်ရာလောက် တွေ့ထားပြီးသား" ဟု ဆိုသည်။ တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသည့် အချက်များမှာ တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေး ရရှိရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ရရှိရေးတို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ အချက်နှစ်ချက်ကို ပေါင်းလိုက်ပါက ဖက်ဒရယ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ်ကို သွားမည်ဟု သမ္မတကြီးကလည်း ကြေညာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ်ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အာဏာခွဲဝေရေးနှင့် သယံဇာတ ခွဲဝေရေးကို ဆွေးနွေးကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက ပြောကြားသည်။
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံတော်မှ ပေးချေရမည့် ဟိုတယ်အချို့၏ အခန်းခများအား တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ထားပြီး ကျန်ရှိသည့် ဟိုတယ်အခန်းခ များကိုမူ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိဘဲ ပေါက်ဈေးအတိုင်း ပေးချေရမည်
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဧည့်သည်များ တည်းခိုရန် စီစဉ်ထားသည့် ရန်ကုန်ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်အား တွေ့ရစဉ်
ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံတော်မှ ပေးချေရမည့် ဟိုတယ်အချို့ အခန်းခများကို တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ထားပြီး ကျန်ရှိသည့် ဟိုတယ်အခန်းခ များကိုမူ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပဲ ပေါက်ဈေးအတိုင်း ပေးချေရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"အားကစား သမားတွေ၊ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဧည့်သည်တွေနဲ့ အထူးဧည့်သည်တွေ တည်းခိုမယ့် အခန်းခကို နိုင်ငံတော်က ကျခံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဈေးနှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး ပေးချေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကိုလည်း အသိပေးထား ပြီးပါပြီ" ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကောင်းထွဋ်က ပြောပြခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်မှ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးရှိ ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း ၂၀ ခန့်ရှိ အခန်းခများကို ပေးချေမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်လျှင် ဒေါ်လာ ၅၀ နှုန်းထက် မပိုသော ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ပြိုင်ပွဲသို့ လာရောက်ကြည့်ရှု့ ကြရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ တည်းခိုမည့် ဧည့်သည်များအတွက် အခန်းခများကိုလည်း သတ်မှတ်ထားခြင်း ရှိမရှိကို ဟိုတယ်ဇုန် အချို့အား မေးမြန်းခဲ့ရာ "ဈေးနှုန်းသတ်မှတ် ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ပေါက်ဈေးအတိုင်း ပေးချေရမှာပါ" ဟု မန္တလေး ဟိုတယ်ဇုန် ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဇွန်က ပြောပြခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးကြည်သိန်းကိုက "အားကစား သမားတွေ နည်းပြတွေနဲ့ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ အထူးဧည့်သည်တွေ အတွက်က ဒေါ်လာ ၅၀ ထက် ပိုယူလို့ မရပါဘူး။ အခြားဧည့်သည်တွေ အတွက်ကတော့ ဈေးသတ်မှတ်တာမျိုး မရှိပဲ ပေါက်ဈေးအတိုင်းပဲ ပေးချေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲကို ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ငွေဆောင်ကမ်းခြေတို့တွင် အားကစားနည်းများအလိုက် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သဖြင့် ရန်ကုန်တွင် ဟိုတယ် ၃၃ လုံးမှ အခန်း ၁၁၉၄ ခန်း၊ မန္တလေးတွင် ဟိုတယ် ၁၉ လုံးမှ အခန်း ၄၄၂ ခန်း၊ နေပြည်တော်တွင် ဟိုတယ် ၂၆ လုံးမှ အခန်း ၄၁၄၅ ခန်းနှင့် ငွေဆောင်တွင် ဟိုတယ် ၉ လုံးမှ အခန်းပေါင်း ၂၂၂ လုံး အသီးသီး အသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း ၁၁၄ လုံးမှ အခန်းပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ကို အသုံးပြုမည်ဟု သိရသည်။
ဘုန်းနေလ(ဒဂုံတက္ကသိုလ်)| တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ယခုပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည့် အနုပညာရှင်များ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုသောအကြောင်းအရာမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် က အနုပညာရှင်နှစ်ဦးအား ခေါ်ယူစစ်ဆေးသည့် မှုခင်းမှတ်တမ်းထွက်ဆိုချက်အနေဖြင့် ထွက်ရှိလာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“စာတွေထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေက တကယ် ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာကို စုံစမ်းနေပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စ ဟာ တကယ်အစစ်အမှန် ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လားဆိုတာကို ပြောရမှာပါ။ ဟုတ်နေတယ်၊ တကယ်အစစ် အမှန်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာက တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ အစစ်အမှန်မဟုတ်ရင်တော့လည်း မဟုတ် တဲ့အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ အခု ဒီစာထဲမှာလည်း ကျွန်တော်လည်း ပါတယ်။ ကျွန် တော့်နာမည်ပါလို့ ဘာမှထွေထွေ ထူးထူးမခံစားရပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စမ်းတောင်မစမ်းဖူးပါဘူး။ ဒါဟာ သုံးဖို့မပြောပါနဲ့။ အစ်ကို ကင်းရှင်းတယ်ဆိုတာ အနုပညာ လောကထဲ ကသူတိုင်း အားလုံးသိကြပါတယ်”ဟု လူမင်းက ပြောဆိုလိုက်သည်။
လူမင်းသည် လက်ရှိတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သည့်အသင်းတွင် ချစ်ကြည်ရေးသံတမန် အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌတစ်ယောက်အနေဖြင့် အနုပညာရှင်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကို ဖော်ထုတ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ဖော်ထုတ်ရာတွင် ခိုင်မာမှုရှိပါက တရားဝင်ထုတ် ဖော်ပြောဆိုသွားမည်ဟုလည်း ထပ်မံပြောဆိုလိုက်သည်။
ယင်းသို့မှုခင်းစစ်ချက်ကို ထွက်ဆိုထားသူနှစ်ဦးမှာ မင်းသမီးနှစ်ဦးဟု ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင်လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
အဆိုပါစာရင်းတွင် ဖော်ပြခြင်းခံရသူ ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)က “ဒီကိစ္စက ဘယ်သူတွေ တင်တာလဲ၊ ဘယ်သူတွေ လုပ်တာလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါ တယ်။ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအနေနဲ့ စုံစမ်းသင့်ပါတယ်၊ ကန့်ကွက်သင့်ပါတယ်။ တရားဝင်ဖြစ်လား မဖြစ် လား၊ ဟုတ်လား မဟုတ်လားဆိုတာကိုတော့ သိရမှပါ။မစိုးကြီးကတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒီကိစ္စ ဟာ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ရမှာဆိုတော့အပြင်ကို မထွက်သင့်ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာက တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ကို သေချာလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဟု ယင်းက ပြောသည်။
ဆေးဝါးသုံးစွဲသည်ဟု ဆက်စပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းခံရသည့် အနုပညာရှင်များ စာရင်းတွင် ကွယ်လွန်သူ မင်းသားလည်း ပါဝင်လျက်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဖောက်သည်တစ်ဦး အနေဖြင့် ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။ ဒါ့အပြင် ဂီတလောကမှ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများ၊ စီးပွားရေးအသိုင်း အ၀ိုင်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ သားသမီးအမည်များလည်း အဆိုပါစစ်ချက်၏ ပြောကြားချက်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိပြီး အချို့မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသူ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးသမားနှင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏အမည်လည်း ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ရင်လတ် ကို ဝန်ကြီးရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ရန် ထိုင်းပြည်သူတို့ ရာဇသံပေး
လက်ရှိ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ရင်လတ်ရှင်နာဝက်ထရာ ကို သမ္မတ ရာထူးကနေ ၂ ရက်အတွင်း နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ အတွက် ထိုင်းပြည်သူတို့ ရာဇသံပေးခဲ့ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
အစိုးရ ဆန့်ကျင့် သပိတ်ခေါင်းဆောင် Suthep Thaugsuban ကိုယ်တိုင် ရင်လတ်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြိး ယင်းစကားကို ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ က အစိုးရ ဆန့်ကျင့် ဆန္ဒပြပွဲ အတော်လေး ပြင်းထန်နေပါပြီ။ အစိုးရ ဆန့်ကျင်တဲ့ ရှပ်ဝါနဲ့ အစိုးရ ထောက်ခံ ရှပ်နီတို့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံတဲ့ အခြေအနေ အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး ရဲများရဲ့  လက်နက်သုံး ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ၂ ဦးသေဆုံး ၄၈ ဦးထက် မနည်း ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရင်လတ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ လက်ရှိမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၊ အစိုးရ ဌာနကို ဦးတည်လို့ ဆန္ဒပြပြီး ထိုင်း တပ်မတော်ကလည်း လုံခြုံရေးကို တင်းကြပ်လာပါတယ်။ ထိုင်းတပ်မတော်မှ ရာထူး အကြီးဆုံး အရာရှိများ ပါဝင်လာတဲ့ ပထမဦးဆုံး ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။ ထိုင်းတပ်မတော် ခေါင်းဆောင် Prayuth Chan- ocha ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုပဲ ထပ်ဖြစ်မလား၊ ရင်လတ်ပဲ ရာထူးက နှုတ်ထွက်မလား၊ အစိုးရ ဆန့်ကျင်အဖွဲ့ပဲ ကျရှုံးမလားဆိုတာ ရင်တမမ နဲ့ စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာခွင့်ရှိအောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်ငြိမ်းခွင့် ဥပဒေကို ရင်လတ်တို့ ပျူထိုင်းပါတီက လွတ်တော်သို့ တင်သွင်းပြီး အတည်ပြုရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေး ပညာရှင်များက ခန့်မှန်း ပြောဆိုပါတယ်။ သက်ဆင် ဝင်ရောက်လာမှုအပေါ်ကို ဘန်ကောက်က အလယ်လတ်တန်းနဲ့ အထက်တန်း လူတန်းစား ပါဝင်သော ရှပ်ဝါ အုပ်စုက စတင် ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်ပြီး လူပေါင်း သောင်းချီ အင်အား ကြီးထွားလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်က ပဋိပက္ခဟာ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း တိကျသော အဖြေ တစ်ခု ထွက်နိုင်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ စောင့်ကြည့်သူများက ခန့်မှန်းထားကြကြောင်း သိရပါတယ်။
တူ နဲ့ထုလည်း မကွဲနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင် စတင်ရောင်းပြီ
နမော်နမဲ့နိုင်တဲ့ ကိုကို၊မမ တွေအတွက် ကမ္ဘာ့အကြမ်းအခံဆုံး စတ်ဖုန်းမျက်
နှာပြင်ကို Cambridge အခြေစိုက် Evolutive Labs ကထုတ် လုပ်ဖြန့် ချိရောင်းချပေးတော့ မှာပါ။
ဖုန်းမကြာခဏလွတ်ကျသူတွေအတွက် ပူစရာမလိုတော့သလို အဆိုပါ မှန်မျက်နှာပြင်ကို တူနဲ့ထုရင်တောင် မကွဲဘူးလို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပညာရှင်တွေ
Rhino Shield Protector လို့အမည်ပေးထားတဲ့ အဆိုပါမှန်ရဲ့အထူက စာရွက်တစ်ရွက်ထက် သုံးဆသာထူပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်
ပေါ် ပြုတ်ကျရင်တောင်ဘာမှမဖြစ်သလို ၄၈ မီတာအမြင့်ကနေ ၂၈၈ ဂရမ်
အလေးချိန်ရှိတဲ့ သံမဏိဘောလုံးပစ်ချရင်တောင် မျက်နှာပြင်ထိခိုက်ခြင်းမရှိ
ပိုလီမာ အခြေခံပြီး Evolutive Labs ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထား
တဲ့ အဆိုပါ မှန်မျက်နှာပြင်ကို iPhone အပါအဝင် လက်ရှိတန်းမြင့်ဖုန်းတွေ
ဖြစ်တဲ့ Gorilla Glass တွေထက်ပိုမိုကြံ့ခိုင်ပြီး တို့ထိအာရုံခံစနစ် ကိုလည်း
သို့ပေမယ့် လက်တလောမှာတော့ အဆိုပါမျက်နှာပြင်ကို iPhone 5,5S နဲ့ 5Cတို့မှာသာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပြီး အခြားစမတ်ဖုန်းတွေမှာ ရမရ
ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
ရောင်းဈေး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀ ထက်မပိုတဲ့ ဈေးနဲ့ ဖြန့်ချိရောင်းချပေး
လအနည်းငယ်အကြာ တည်ငြိမ်နေခဲ့သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ် နှုန်းထားများမှာ ငွေလဲ ကောင်တာများနှင့် ပြင်ပဈေးကွက်တွင် ရက်ပိုင်းအတွင်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀ ကျပ်ခန့် ရုတ်တရက် မြင့်တက် လာကြောင်း ငွေကြေးဈေးကွက် အတွင်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်းမှာ တရားဝင် ငွေလဲကောင်တာ များတွင် အောက်တိုဘာလဆန်း ပိုင်းမှ စတင်၍ ဝယ်ဈေး ၉၆၉ ကျပ်၊ ရောင်းဈေး ၉၇၆ ကျပ် ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေရာမှ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဝယ်ဈေး ၉၇၉ ကျပ်မှ ရောင်းဈေး ၉၈၉ ကျပ်အထိ မြင့်တက်သွားကြောင်း ငွေလဲကောင်တာ လဲလှယ် နှုန်းထားများအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ တစ်ဒေါ်လာ သတ်မှတ်နှုန်းထားမှာ ၉၇၃ ကျပ်သာ ဖြစ်သော်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ၉၈၃ ကျပ်ဟု ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဗဟိုဘဏ်က ကြေညာသည်။
တရားဝင် ငွေလဲကောင်တာများ သာမက ပြင်ပဈေးကွက်တွင်ပါ ဒေါ်လာဈေး အပြောင်းအလဲ ရှိပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၄ ကျပ်ဝန်းကျင် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း ပြင်ပ ငွေကြေးဈေးကွက် အတွင်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပြင်ပဈေးကွက်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ဝယ်ဈေး တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၉၇၀ ကျပ်၊ ရောင်းဈေး ၉၇၆ ကျပ်သာ ရှိရာမှ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဝယ်ဈေး ၉၇၄ ကျပ်၊ ရောင်းဈေး ၉၈၀ ကျပ်ဝန်းကျင် ပေါက်ဈေး ရှိကြောင်း ယင်းဈေးကွက် အတွင်းမှ သိရသည်။
ဒေါ်လာလဲနှုန်း တက်သော်လည်း ပြည်ပမှ တင်သွင်းရသော စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများမှာမူ အပြောင်းအလဲ မရှိသေးကြောင်း ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပထမနှစ်တက်မည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တက္ကသိုလ် အဆောင်များတွင် ယခုနှစ်မှစ၍ ဦးစားပေး နေထိုင်ခွင့် ပြုမည်
(ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားနေစဉ်)
မကြာခင်တွင် ပထမနှစ်တက်မည့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တက္ကသိုလ် အဆောင်များတွင် ယခုနှစ်မှစ၍ ဦးစားပေး နေထိုင်ခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ခေတ္တပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်က နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ စိန်ရတုခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာတွင် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အထက်ပါကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ထားတာ တစ်ခုကို ပြောရရင် မကြာခင် ၅ ရက်နေ့ကျရင် First Year တွေ ကျောင်းတက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်များမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ဖန်တီးရေး၊ သင်ကြားရေး ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ဖန်တီးရေးမှာ အဆောင်နေဖို့ ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနှစ်ကစပြီးတော့ ပထမနှစ် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို ဦးစားပေးပြီးတော့ လက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မယ့် ကိစ္စတွေကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်က ထပ်မံပြောကြားသည်။
ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်း ဆောင်ရွက်လို့ မရသဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ ပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခေတ္တပညာရေး ၀န်ကြီးက ထပ်မံဆိုသည်။
ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာရေးနှစ်တွင် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနသည် ပညာရေး ဘတ်ဂျက်အနေဖြင့် ငွေကျပ် ၉၀၉ ဘီလီလျံကျော် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး ကျောင်းအရေအတွက်အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယခုကျောင်း အရေအတွက်မှာ ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့ကြောင်း ခေတ္တပညာရေး ၀န်ကြီးက ထပ်မံဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးရေမှာ ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာကြောင်း သိရပြီး ကျောင်းသားအရေအတွက် အနေနဲ့လည်း ၈ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားသည်။
"အဆောင်နေရာထက် ကျောင်းသားဦးရေက ပိုများမယ်ဆိုရင် မူအရ ရွေးရမယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုရင် ကျောင်းသားအားလုံးအတွက် နေရာရှိတယ်။ တချို့ကျောင်းတွေကျတော့ နေရာနည်းနည်း လောလောဆယ် အကန့်အသတ်က ရှိနေတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျောင်းစပြီးဖွင့်တာနဲ့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုရင် စဖွင့်တာနဲ့ ရမှာပေါ့။ အဆောင်လျှောက်တာတွေက အခုကတည်းကစပြီး လျှောက်ရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို မူနဲ့ရွေးရမှာပေါ့။ များလို့ရှိရင် ရှိတဲ့ Capacity ထက်များရင် မူနဲ့ရွေးရမှာပေါ့။ လောလောဆယ်မှာ မဆောင်ရွက်နိုင်တာဆိုလို့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လေးကျောင်းပဲ ရှိတယ်" ဟု ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်က ပြောကြားသည်။
လက်ထပ်ပြီး သိပ်မကြာသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ မကြာခဏရန်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ရန်ဖြစ်တိုင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးကြတာကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး နာကျင်ထိခိုက်ကြရတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက် စကားများရန်ဖြစ်ကြပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဇနီးဖြစ်သူက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ကွာရှင်းဖို့ ရှေ့နေတစ်ဦးဆီရောက်လာခဲ့တယ်။
“ကျွန်မရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဘူး.. ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ”
အမျိုးသမီးရှင်းပြတာကို နားထောင်ပြီး ရှေ့နေကမဖြေခင် မေးခွန်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်။
“ကုန်အပြည့်တင်ထားတဲ့ ကုန်ကားတစ်စီးက တံတားတစ်ခုကို ဖြတ်မယ်ဆိုပါစို့.. ကားပေါ်မှာရှိတဲ့ ကုန်တွေက တံတားဘောင်ထက် နည်းနည်းမြင့်နေတယ်။ ကားပေါ်ကကုန်ကိုမချဘဲ တံတားကလွတ်အောင် ဘယ်လိုမောင်းမလဲ”
အမျိုးသမီးက ရှေ့နေရဲ့အမေးကို အတန်ကြာစဉ်းစားပေမယ့် အဖြေမထွက်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံး ရှေ့နေရဲ့ အရိပ်အမြွက်ကြောင့် “ဘီးကို လေနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်” လို့ သူဖြေခဲ့တယ်။
“သိပ်မှန်တာပေါ့... ဘီးကို လေလျှော့လိုက်ရင် ကားနိမ့်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါမှ တံတားကို ဖြတ်လို့ရမယ်။ ဒီလိုပဲ... အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်တောင်းဆိုမှုတွေ အရမ်းမြင့်နေသလား၊ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ ဒီကားကြီး အလွယ်တကူမောင်းနှင်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့လေ (စိတ်)ကိုလည်း လျှော့သင့်တယ်မဟုတ်လား”
ရှေ့နေပြောတာကို နားထောင်ပြီး အမျိုးသမီးက “ဟုတ်ကဲ့.. ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိပါပြီ” ဆိုပြီး ပြန်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်ထားသင့်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တချို့ကို သူမ ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်သည်းခံတာတွေ၊ လေးစားမြတ်နိုးမှုတွေ၊ အနိုင်မယူ နောက်ဆုတ်အလျှော့ပေးတတ်မှုတွေနဲ့ မိမိစိတ်ကိုလျှော့ချတတ်မှုတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ တဖြည်းဖြည်း ရန်လိုမှုတွေနည်းလာပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ များလာခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ အိမ်ထောင်ရေးက ကားတစ်စီးနဲ့တူပါတယ်။ အဲဒီကားပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ဘဝရဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ အိပ်မက်တွေကို တင်ဆောင်ထားတယ်။ ကားက ကုန်အပြည့်နဲ့ ရှေ့ကိုမောင်းနှင်နေစဉ်မှာ ကျွန်မတို့က ဘီးကို လေဖြည့်ပေးတတ်ရမယ်။ ဒါမှ ကားက ရှေ့ကိုအလွယ်တကူသွားနိုင်မယ်။ ထို့အတူ အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးဖြစ်တဲ့ တံတား၊ လိုဏ်ခေါင်းတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ကျွန်မတို့က ဘီးလေကို လျှော့ပေးတတ်ရပါမယ်။ ဒါမှ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ကားကြီးက ဘဝရဲ့အတားအဆီး၊ အခက်အခဲတွေကို အလွယ်တကူ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
အသေအချာစဉ်းစားကြည့်ရင် အိမ်ထောင်ရေးတင်မကပါဘူး... လူ့ဘဝရဲ့ အရာအားလုံးမှာလည်း အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်းဆက်ဆံရာမှာလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အလျှော့မပေးဘဲတင်းခံကြရင် နောက်ဆုံးမှာ နှစ်ဖက်လုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြရတယ်။ အချင်းချင်း စိတ်(လေ)လေး နည်းနည်းလျှော့ခဲ့ကြရင် အရာအားလုံးက အဆင်ပြေပြီး ဘဝရဲ့ဘီးလုံးက ရှေ့ကို ရှောရှောရှူရှူနဲ့ ဆက်လှိမ့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းလင့် -- http://www.duwenzhang.com/wenzhang/shenghuosuibi/shenghuoganwu/20081029/22936.html